Izinzuzo zebhotela le-shea yezinwele nezikhumba - I-Afrikhepri Fondation
ilanga, july 25, 2021
LI-Shea tree isihlahla somndeni wakwaSapotaceae esikhula endle e-Afrika ngaphakathi kwendawo esukela eMali iye eSudan enyakatho futhi isuka eTogo iye e-Uganda eningizimu. Lokhu kubizwa ngegama labathengisi "ibhande le-shea".
I-Shea yisihlahla esivuthiwe ukuphakama okungamamitha ayi-12 kuye kwangama-20 ngamagatsha aminyene, amafishane kukakhokho omelana nemililo yehlathi. Amacembe ayodwa, amakhulu ahlanganiswe ekugcineni kwamahlumela. Izimpande zayo zibucayi kakhulu, zivimbela ukuguguleka komhlaba futhi zikhuthaza ukuhlangana nezinye izitshalo.
Isikhathi sokuphila kwayo silinganiselwa eminyakeni engama-200 noma engama-300. Ukukhula okuphelele kwesihlahla ngakho-ke umkhiqizo omkhulu wezithelo awufinyelelwa kuze kube ngu-50 wawoth ngonyaka.
Ngokuvamile kune-5 kuya ku-15 kg yama-alimondi angasetshenziswanga isihlahla ngasinye ngonyaka.
Izithelo ze-shea eze ngesimo semifino emnyama e-ovoid egcwele izithelo eziqukethe i-1 noma i-2 imbewu enobuningi ene-red elliptical futhi iqukethe i-kernel enamandla kakhulu.
Okuqukethwe kwamafutha ku-45% kuya ku-55% isisindo.
Izithelo zonyaka ngehektha ngalinye lamathani ayi-9 kuya kwayi-17 ezithelo ezintsha zingenzeka, ama-50 kg ezithelo ezintsha ahlinzeka ngama-20 kg wama-alimondi omisiwe kanye no-4 kg webhotela.
Izithelo zithathwa phakathi kukaJuni noSeptemba.
Indlela yase-Afrika yokulungiselela ibhotela iqukethe ukususa uginindela ezithelweni ngokuvutshelwa nokuwashwa. Imbewu bese iyancishiswa ibe yinhlama ngokushaya ngamandla bese kuthi umphumela oshonelwe uphonswe emanzini abilayo.
Ekupholiseni, amafutha e-almond antanta futhi ngaleyo ndlela angaqoqwa acishe ahlanzeke.
Kungumsebenzi ovame ukugcinelwa abesifazane, yingakho unikezwa isiqu esithi "igolide labesifazane".
Ibhotela ye-fat noma i-shea ivame ukuthengiswa emakethe ngamapuleti noma amabhola.
Ukwakhiwa kwebhantshi lase-Africajou
Ibhotela le-Shea lakhiwe ngama-glycerides ama-fatty acid angagcwele futhi angagcwali.
3 kuya ku-7%
35 kuya ku-45%
40 ukuze 55%
3 ukuze 8%
Akukhoniseki phakathi kuka-8% no-10%. Ingenye yezimbewu ezicebe kakhulu ezintweni ezingenakubekeka.
Amaprotheni: 0,7 kuya ku-1,3 g (ye-100 g)
Ubhontshisi weShea unomzimba obunomsoco, obushelelezayo kanye neziphikisayo.
Okungenakuxhunyaniswa kuqukethe ama-triterpene alcohol ngobuningi bawo obhekene nomsebenzi wokulwa nokuvuvukala.
Ukuhlolwa njenge-decongestant yamakhala kuye kwanikeza imiphumela emihle kakhulu. Ukusetshenziswa kwebhotela le-shea ngaphakathi kwekhala ku-rhinitis kunciphisa ukuminyana.
U-Shea uphulukisa isikhumba ekwelapheni i-eczema kanye ne-zonas. Igcina imisipha ngaphambi nangemva kwemidlalo yezemidlalo futhi isebenza njengomkhiqizo wokusikhipha umuthi uma kwenzeka ukuchithwa noma ukuxoshwa. Iqukethe amavithamini A, E no-F.
Izici kanye nokusetshenziswa kwendabuko kwebhotela le-shea
E-Afrika, imikhiqizo ye-shea ithengiswa ngendlela yamantongomane omiswe ngelanga, ama-alimondi agayiwe (kadanya), ibhotela le-shea kuma-slabs noma imajarini ekheniwe.
Sekuyiminyaka eyizinkulungwane, kusukela eNdlovukazi uNefertiti kuya ebuhle obuhle, ezokupheka zendabuko zase-Afrika, ibhotela lika-shea lisetshenziselwa ukuphulukisa okungavamile kwesikhumba.
I-Shea yingxenye ebalulekile yokusetshenziswa kwekhaya.
Isetshenziswa ekudleni ngendlela efanayo namafutha esundu noma amakinati, ibuye isetshenziswe ngokwesiko kwi-cosmetology, dermatology nase-pharmacopoeia.
Ivame ukusetshenziselwa ekwakheni amafutha nama-poultices.
Kuyinto emollient nokwelashwa. Bezitika nge-khessal (ukuguqulwa kwesikhumba), abesifazane base-Afrika bavame ukuzithola benesikhumba esonakele bese bephendukela ku-shea ukulungisa isikhumba sabo.
I-Shea ithambisa izinhlungu zomzimba, i-rheumatism ne-aches.
Isetshenziswa ezinsikeni, emakhandleleni nasezinsikeni zokugcina izindlu zokuvikela amanzi.
E-Afrika, ibhotela le-shea lisetshenziswa ekudleni kwabantu. Into enamafutha, ingena ekwakhiweni kwezitsha zase-Afrika, amasoso nokudla okuthosiwe.
EYurophu, isetshenziswa ezimbonini lapho kwenziwa ushokoledi, i-confectionery nemargarine. Kuletha ubushelelezi obungenakuqhathaniswa.
Ukuvuselelwa kweqiniso, ukuvuselela kabusha, ukuvuselela kabusha, i-shea kuyinto ephawulekayo yokuphikisa. Ilwa nezinwele ezomile, ezinesibhakabhaka kanye namanothi alula.
Ezithombeni, ibhotela ye-shea isetshenziselwa:
Ukunakekelwa kwezinwele : i-shea iyondla, ivikele, ikhuthaze ukukhula kwezinwele. Kungumkhiqizo ofanele wokunakekelwa kwezinwele eziqhekekile, ezomile, ezilimele nezintekenteke. Ingasetshenziswa njenge-mask noma njenge-primer.
Ukunakekelwa ubuso : umuthi we-shea uvikela, upha amanzi, unezela ukuqina nokulwa nemiphumela yokuguga. Kuyinto enhle yokulwa nemibimbi.
Ukunakekela izindebe Amafutha e-Shea ayancipha futhi avikele ikakhulukazi ngezikhathi zobanda obubandayo. Ibuye isetshenziswe njenge-balm noma lip gloss.
Ukunakekela isikhumba : U-Shea uyamangalisa kuma-anti-stretch mark nakuma-post-depilatory cream. Ukwenza isikhumba sakho sisebenze, isibonelo, ungafaka isipuni kubhavu wakho oshisayo. Futhi kungumkhiqizo omuhle kakhulu ngaphezu komkhiqizo wakho welanga ngaphambi nangemva kokushuka, kwesikhumba esigawe ngokulinganayo..
Kungumkhiqizo omuhle kakhulu wokubhucunga umzimba ukugcina imisipha ngaphambi nangemva kwemisebenzi yezemidlalo. Uma kwenzeka ubuhlungu bezitho, gcoba izindawo ezibuhlungu nge-shea bhotela okungenani kabili ngosuku.
Ibhotela le-Shea 500 g - Okungokwemvelo, okungachazwanga, okumsulwa nokwendalo - 100% emsulwa
Thenga i- € 6,79
I-Birth Raw Organic Shea Butter (n ° 306) - 1kg - 100% emsulwa, engachazwanga, yemvelo futhi eqinisekisiwe ...
Thenga i- € 19,99
I-Shea bhotela 1kg - Okungokwemvelo, okungachazwanga, okumsulwa nokwendalo - 100% emsulwa
Okusha okungu-2 kusuka ku- € 11,99
I-Birth Raw Organic Shea Butter (n ° 306) - 250g - 100% emsulwa, engachazwanga, yemvelo futhi eqinisekisiwe ...
Okusha okungu-2 kusuka ku- € 10,99
Thenga i- € 13,99
Thenga i- € 21,99
I-Organic Shea Butter Pranaturals 300ml, 100% Raw, Moisturizing And UV Protector Wazo Zonke Izinhlobo ...
Thenga i- € 8,99
Kugcine ukubuyekezwa ngoJulayi 25, 2021 2:01